जाडो मौसममा हृदयाघातको जोखिम हुन्छ, कसरी सतर्क रहने ?
२०७५ कार्तिक १३ मंगलबार ०१:१३:३८ तामसालिङ खबर
काठमाडौं । मौसमले विभिन्न तरिकाबाट तपाईको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। जाडोमा आरथाइटिस रोगीहरुलाई हावाको चाप र तापक्रम घट्नाले जोर्नीहरु दुख्ने हुन्छ । त्यसैगरी मौसम परिवर्तनले माइग्रेन भएकालाई पनि सताउने गर्दछ । हिमपातले दमका बिरामीलाई धेरै दुःख दिन्छ।
स्वेडेनको लन्ड युनिभर्सिटीका डिपार्टमेन्ट अफ कार्डियोलोजी डा. डेविड एरलिन्ज भन्छन् हृदयघात घद्दो तापक्रम, चिसो सिरेटो, मन्द वायुमण्डलीय दबाब, कम सूर्योदय अवधि आदिले बढाउने सम्भावना हुन्छ । अध्ययनमा के भटियो भने हृदयाघातको उच्च जोखिम त्यस दिन थियो जुन शुन्य डिग्री ३२ डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी सेल्सियस थियो ।
तापक्रम ३- ४ डिग्री सेल्सियस तापमान हुँदा हृदयाघातको सम्भवाना घटेको पाइयो। जब न्यूनतम तापमान ६८ डिग्री देखि ३२ डिग्री फरेनहाइटमा घट्छ त्यतिबेला हृदयाघात हुने सम्भवाना १४ प्रतिशत बढेको देखिएको डा. इरलिन्ज बताउँछन् । अध्ययनमा के पनि भेटियो भने हावाको तापक्रम ७.४ डिग्री सेल्सियसमा वृद्धि हुनुको अर्थ २.८ प्रतिशत हृदयाघातको जोखिममा कमी आउनु हो ।
यो नतिजा २ लाख ७४ हजार ०२९ बिरामीहरुमा गरिएको अध्ययनबाट पत्ता लागेको थियो । यो अध्ययन स्वेडेस रेजिस्ट्रिीको तथ्यांकबाट अध्ययन गरिएको हो। यो अध्ययनले हृदयघात र मौसमको सम्बन्ध देखाएको छ । जाडो मौसमममा हृदयघातबाट बच्न लाई शारीरिक क्रियाकलाप कम गर्नुका साथै गर्न घरभित्र बस्न चिकित्सक सुझाव दिन्छन् ।
तारेको तथा भुटेका खानेकुराको सेवन कम गर्नुहोस् र खानामा नुन कम खानुहोस् ।
आफ्नो तौल सन्तुलित राख्नुहोस् । हरेक दिन नियमित रुपमा आधा घण्टा हिड्ने बानी गर्नुहोस् ।
योगा तथा व्यायाम नियमित गर्नु आवश्यक हुन्छ । भोजनमा रेशादार खानेकुरा समावेश गर्नुहोस् ।
यी खानेकुरा खाने गर्नुहोस् :
१. प्याज : यसको नियमित सेवनले रक्तप्रवाह ठीक राख्दछ, मुटुको धड्कन सन्तुलित गर्न मद्दत गर्दछ । मुटुरोगको जोखिम कम गर्दछ ।
२. गोलभेँडा : यसमा पाइने भिटामिन सी, बिटा क्यारोटिन, लाइकोपिन, भिटामिन ए तथा पोटासियम तत्वले मुटु रोगको जोखिम घटाउँछ ।
३. लसुन : खाली पेटमा विहान दुइ केश्रा लसुन पानीसँग चपाएर नियमित खाने गर्नुहोस् ।
४.गाजर : गाजरको जुस बनाएर पिउने र सलादको रुपमा खाने गर्नाले यो मुटुको लागि निकै लाभदायक हुन्छ ।